Windows 10, Windows 8 x32 & x64 အား Office Word 2013 တင်ပြီး Myanmar3 မှန်အောင်ပြုလုပ်နည်း
(၁) ပထမအဆင့် သင့်ကွန်ပျူတာတွင် Windows 8 (သို့) Windows 10 တစ်ခုခု အသုံးပြုရမည်ဖြစ်သည်။
(၂) Microsoft Office 2013 ကို တင်ထားပြီးဖြစ်ရမည်။
(၃) Myanmar3 ဖောင့်များကို ဒီနေရာမှာနှိပ်ပြီး Download လုပ်ကာ Install ပြုလုပ်ပါ။
(၄) အခြား Keyboard လက်ကွက် များဖြင့် အဆင်မပြေပါ။ Keyman 9.0 ကို ဒီနေရာမှာ နှိပ်ပြီး Download လုပ်ကာ Install ပြုလုပ်ပါ။
အောက်ပါပုံအတိုင်း မြင်ကွင်း၏ ဘယ်ဘက်ထောင့်တွင် keyboard များ မြင်တွေ့ရပါမည်။
မတွေ့မြင်ရသေးပါက Keyman Desktop 9.0 ကိုဖွင့်ထားပါ။
Keyboard လက်ကွက်များ အား တစ်ခုနှင့် တစ်ခု ပြောင်းသော Keyboard Shortcut မှာ Windows+Space bar ဖြစ်ပါသည်။
Keyboard အား MYanmar3 ပြောင်းပြီး Word 2013 ထဲတွင်ရိုက်ကြည့်ပါက အောက်ပါအတိုင်း အဆင်ပြေမည်မဟုတ်ပါ။ ထို့အတူ ယခင် Myanmar3 ဖြင့်ရိုက်ထားသော စာသားများလည်း အောက်ပါအတိုင်း အဆင်ပြေပြေ ပေါ်မည်မဟုတ်ပါ။
(၅) သင် အသုံးပြုနေသော Windows သည် x32 နှင့် x64 မည်သည်ဖြစ်ကြောင်းကို အရင်သိအောင် လုပ်ပါ။ မသိလျှင် This Computer ကို Right Click နှိပ်ပြီး Properties ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
အောက်ပါပုံအတိုင်းပေါ်လာလျှင် အနီရောင်ပြထားသောနေရာတွင် x32 bit (သို့) x64 bit ဖြစ်သည်ကို ဖော်ပြထားပါလိမ့်မည်။
((((( x32 ဖြစ်လျှင် )))))
သင့်ကွန်ပျူတာသည် x32 ဖြစ်လျှင် ဒီနေရာတွင်နှိပ်ကာ Proofingtools ကို download လုပ်ပြီး Install လုပ်ပေးပါ။
((((( x64 ဖြစ်လျှင် )))))
သင့်ကွန်ပျူတာသည် x64 ဖြစ်လျှင် ဒီနေရာတွင်နှိပ်ကာ Proofingtools ကို download လုပ်ပြီး Install လုပ်ပေးပါ။
(၆) Word 2013 အားဖွင့်ကာ အောက်ပါ အတိုင်း Fonts Dialog Box အားနှိပ်ပါ။
ထိုအခါ Font Box ပေါ်လာလျှင် အောက်ပါအတိုင်း Advanced ကိုနှိပ်ပါ။
ထို့နောက် အောက်ပါအတိုင်း(၁) Ligatures: ကိုနှိပ်၊ (၂) All ကိုရွေးပြီး (၃)OK ကိုနှိပ်လိုက်။
ထပ်မံပြီး Myanmar3 ဖြင့်စာသားများပြန်ရိုက်ကြည့်ပါ။ စာလုံးများအားလုံးအစဉ်ပြေပါလိမ့်မည်။
မှတ်ချက် ။ ယခင်ရိုက်ထားသော စာဖိုင်အဟောင်းများတွင်လည်း စာသားများအဆင်ပြေပြေ ပေါ်လာမည်မဟုတ်ပါ ထိုစာသားများအားလုံးကို Select မှတ်ပြီး ယခု အဆင့် (၆)ပါ နည်းလမ်းများအတိုင်း အဆင့်ဆင့် လုပ်လိုက်ပါ အဆင်ပြေပြေပေါ်လာပါမည်။
Windows 8 and Windows 10 , Office 2013 Myanmar 3
Posted by Aung Chan Lin at 5:29 PM 1 comments
Making USB bootable disk For Acer Aspire E1-410
၁။ Windows 8.1 64-bit DVD ကို သင့်ကွန်ပျူတာထဲ ထည့်သွင်းထားပါ။
၂။ Memory Strike အနည်းဆုံး (8 Gb) အလွတ် ကို ကွန်ပျူတာတွင်ထည့်သွင်းထားပါ။
Keyboard မှ Win Key + R ကိုနှိပ်ပါ။
ပေါ်လာသော Run Box ထဲတွင်
cmd ဟု ရိုက်ထည့်ပြီး Enter နှိပ်ပါ။
အနက်ရောင် Command Prompt Box တစ်ခုပေါ်လာမည်။
ထိုထဲတွင် diskpart ဟု ရိုက်ထည့်ပြီး Enter နှိပ်ပါ။
ထပ်မံ အနက်ရောင် Box တစ်ခုပေါ်လာပါဦးမည်။
list disk ဟုထပ်မံ ရိုက်ထည့်ပြီး Enter နှိပ်ပါ။
ထိုထဲတွင် သင့် Memory Strike မှာ Disk 1 (သို့) Disk2ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ 1 နှင့်2မကွဲပြားလျှင် မိမိထည့်သွင်းထားသော Memory Strike ၏ အရွယ်အစား Space ကို ကြည့်ပါ Gb ဖြင့် ဖော်ပြပါမည်။ အကယ်၍ Disk 1 ဖြစ်နေလျှင် -
select disk 1 ဟု ရိုက်ထည့်ပြီး enter နှိပ်ပါ။
ထို့နောက် အောက်ပါအတိုင်း အဆင့်ဆင့် ရိုက်ထည့်သွားပါ။
ထို့နောက် သင့်ထည့်သွင်းထားသော Windows DVD ထဲမှ ဖိုင်များအားလုံးကို memory Stike ထဲသို့ ထည့်သွင်းလိုက်ပါ။
သင့်၏ Aspire E1-410 ကွန်ပျူတာကို ပိတ်ထားပြီး ဘထ္ထရီကို ဖြုတ်လိုက်ပါ။
ထို့နောက် Memory Strike ကို တပ်ဆင်ပါ။ ဘထ္ထရီအား ပြန်လည်တပ်ဆင်ပါ။
ထို့နောက် ကွန်ပျူတာ ပါဝါခလုတ်အား နှိပ်လိုက်ပါ။ ချက်ချင်း F2 ခလုတ်ကို ဆက်တိုက်နှိပ်ထားပါ။
Bois Setup ပေါ်လာလျှင် Boot ထဲသို့ သွားပြီး အောက်ပါအတိုင်း ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ပေးလိုက်ပါ။
မရှင်းလျှင် အောက်တွင် စာသားကိုကြည့်ပါ။
Secure Boot : [Enabled]
Boot Priority order :
1. USB HDD: ADATA USB Flash Drive
2. HDD: St500LT012-9W122
3. ATAPI CDROM: HL-DT-ST DVDRAM DUAON
4. Windows Boot Manager
6. Network Boot- IPV4:
7. USB CDROM:
8. Network Boot-IPV6:
ထို့နောက် F10 ကို နှိပ်ပြီး ထွက်လိုက်ပါ ထိုအခါ ပြင်ဆင်မှုများကို သိမ်းဆည်းပြီး ထွက်မည်လားဟု မေးလာလျှင် Enter ကိုနှိပ်ကာထွက်လိုက်ပါ ။
သင့် Aspire E1-410 ကွန်ပျူတာအား USB မှ တစ်ဆင့် Boot လုပ်နိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည် ။
အထက်ပါနည်းဖြင့် Boot တက်မလာသေးလျှင် သင့် Memory Strike ထဲရှိ
efi ဖိုင်ထဲ မှ boot ထဲသို့ အောက်ပါ ဖိုင်တစ်ဖိုင်အား Download လုပ်ကာ ထည့်သွင်းပါ။
[ဒေါင်းလုလုပ်ရန် ဒီမှာ နှိပ်ပါ ]
how to make Bootable USB for Acer Aspire E1-410
Acer Aspire E1-410 Boot Error
Acer Aspire E1-410 USB boot
Can't Install Windows on Acer Aspire E1-410
Posted by Aung Chan Lin at 7:37 PM 1 comments
Posted by Aung Chan Lin at 9:44 PM 82 comments
Windows 10, Windows 8 x32 & x64 အား Office Word 20...